दुनियाँलाई विश्वास गर्न गाह्रो पर्ने एउटा यस्तो घटना! एकपटक अवस्य पढ्नुहाेला – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > दुनियाँलाई विश्वास गर्न गाह्रो पर्ने एउटा यस्तो घटना! एकपटक अवस्य पढ्नुहाेला
admin September 2, 2020 जीवनशैली, रोचक, समाज	0
एजेन्सी । विश्वमा अनेक घटनाहरु देख्न पाइन्छ । कति घटना हामीले विश्वास गर्न गाह्रो पर्ने खालका पनि हुन्छन् । यस्तै एक घटना भारतबाट बाहिर आएको छ । भारतको गुजरातमा भएको एक घटनाले त्यहाँका मानिसहरु अचम्ममा परेका छन् । सो घटनाले प्रेम अन्धो हुन्छ भन्ने किंवदन्तीलाई सत्य सावित गरेको छ ।
एकाएक भागेका उनीहरुले बाल्यकालदेखि नै छिमेकीको रुपमा एक अर्कालाई परिचीत थिए भनिएको छ । बुबा सुरतको कतरगाम क्षेत्रबाट हराए भने आमा गुजरातको नवसारीमा आफ्नै घरबाट बेपत्ता भइन् । दुवै जना बेपत्ता भएपति परिवारले प्रहरीसमक्ष उजुरी दिएका थिए ।
घटना फैलिएपछि एक नातेदारले उनीहरुले बाल्यकालदखिनै एक अर्कालाई चिनेको कुरा बाहिर ल्याएका हुन् । एउटै टोलमा बस्ने हुनाले उनीहरू सानैदेखि मायामा परेको समेत खुलेको छ । विवाहपछि पनि सम्बन्ध रहेकाले उनीहरू भागेको हुनसक्ने साथीहरूले बताएका खबर सार्वजनिक भएको छ ।
०७७ आषाढ ०५ गते शुक्रबार ई. स. २०२० जुन १९ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य